Olee otú igwu egwu gị vidiyo na VLC na airplay
Iji airplay otu onye nwere ike yiri ihuenyo nke ọ bụla iOS ngwaọrụ ma ọ bụ Mac na Apple TV. Ọ nwere ike na-enye aka ma ọ bụrụ na ị chọrọ ikere òkè gị ngosi gụnyere photos, fim wdg na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ na a ibu ihuenyo. Anyị na-aga-atụle otú ị nwere ike iji VLC Media Player na airplay ọnụ na-egwu videos na nnukwu ihuenyo ileba anya dị ka smart TV ma ọ bụ Apple TV.
Mepee video iji VLC Media Player na kọmputa gị na ị ga-achọ enuba n'elu airplay.
Ugbu a gaa n'elu aka nri n'akụkụ gị Mac desktọọpụ na pịa akara ngosi na anya dị ka a TV na-emeghe a dropdown ndepụta niile ejikọrọ ngwaọrụ na họrọ Mee TV ị ga-achọ enuba video ka.
Ugbu a, gaa na audio mwube nke VLC Player site na ịpị Audio button kwupụta n'elu aka ekpe gị ákwà na site na dropdown menu, pịa Audio Ngwaọrụ na-emeghe niile dị nhọrọ. Gbaa mbọ hụ na airplay họrọ ná ndepụta ahụ. Nke a dị mkpa iji hụ na video ụda a sụgharịrị site na Apple TV na ị ga-eji.
Họrọ video ntọala ị ga-achọ iji na-egwu video na. Gaa button Video nri na-esote na Audio button na unu enweta mbụ ma họrọ video mode si ebe a. Fullscreen ga-atụ aro nhọrọ.
Q. VLC on airplay-arụ na-enweghị ụda! Mgbe akpọ video na VLC na Air Play mirroring ka Apple TV, video arụ site TV ezi ma audio na-aga n'ihu na-egwu site na Mac okwu.
A. ahụ na-eme mgbe nhọrọ nke airplay n'okpuru Audio> Audio Ngwaọrụ na-adịghị nyeere na gị Mac, nanị hụ na ị na-adịghị atụ uche si na Nzọụkwụ 3 dị ka e n'elu mgbe mwube VLC site airplay.
Q. Enwere m ike enuba ọ bụla video keere na VLC ọkpụkpọ ka Apple TV?
A. Ee, ọ bụ ezie na Apple TV bụ isi na-akwado .mp4 na .m4v, ị ga-enwe ike na-egwu fọrọ nke nta niile video faịlụ na ụdị site VLC Player on Apple TV.
Q. Gịnị ma ọ bụrụ VLC apụghị-egwu DVD ma ọ bụ vidiyo?
A. Ọfọn, ọ bụrụ na ị na-enweghị ike na-egwu ụfọdụ vidiyo na DVD iji VLC na airplay, mgbe ahụ, anyị nwere ihe dị ịtụnanya ọzọ n'ihi na ị na Wondershare Video Converter Ultimate. Ọ bụ kpam kpam dakọtara na Apple TV na ọtụtụ ndị ọzọ media streamers na smart TV na na ike ga-eji ka mfe enuba ụdị ọ bụla nke video / DVD. Ị pụrụ ịgbaso njikọ dị ka nyere n'okpuru na-agbalị ya maka free.
- Http: //download.wondershare.com/video-converter-ultimate_full495.exe"
Q. M Kwesịrị gbanyụọ Bluetooth idozi akara mmiri airplay video na OS X?
A. Ọfọn, ọtụtụ ndị nwetara Njikọta mbipụta na-eji airplay ha na TV, tumadi akara mmiri, static ma ọ bụ oyi kpọnwụrụ oyiyi N'ikpeazụ-eduga na njikọ ịlụ ama esịn mgbe ụfọdụ. Apple ka kwetara a nke na-arụ ọrụ na a fix n'ihi na nke a ahụhụ Otú ọ dị na pụtara oge, ịmafe anya / gwụ ngwaọrụ gị Bluetooth redio N'ezie gosiri mma arụmọrụ na nke a.
Enweta ihe All-na-otu Video Ntụgharị maka YouTube bulite na akakabarede
DVR-MS Editor: Olee dezie DVR-MS Files ngwa ngwa na mfe
RMVB cutter: Olee otú Bee RMVB faịlụ na Ọ dịghị Ogo Loss
Olee otú dezie tụgharịa Video
> Resource> Video> Olee otú igwu egwu gị vidiyo na VLC na airplay